Zingaphi iisentimitha nganye? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Zingaphi iisentimitha nganye?
Imitha yesikwere iyunithi yomlinganiselo wendawo.Uba nomfanekiso wesikwere esecala layo eli-1 leemitha okanye iisentimitha ezili-100 .. Ukufumana inani leesentimitha ezikweleyo (okanye, ngakumbi, indawo yalo), udinga i-100 cm 100 cm. Ngenxa yoko, ufumana i-10 000 cm.
Ngubani okhumbula izifundo kwimathematics kufuneka azi ukuba ziipesenti ezili-100 kwimitha enye, ngoko ke nathi sifunde iiyunithi zemathematics kwizibalo kwizifundo kunye nendlela ezinokubalwa, kuba imitha yesikwere iyunithi yendawo / igumbi lokulinganisa, ukuze sikwazi ukubala ukuba zingaphi iisentimitha ezikwere imitha, kufuneka nje siphindaphinde icala elinye lesikwere kwelinye, oko kukuthi: 100cm * 100cm kwaye sifumana impendulo enomdla kwisibalo = 10 zeesentimitha skwere.
Isentimitha ngumlinganiselo wobude, kwaye imitha yesikwere ngumlinganiselo wendawo kwaye akukho ndlela yokubathelekisa. Umbuzo uvakala ngokuchanekileyo xa ufuna ukwazi ukuba zingaphi iisentimitha ezisisikwere esinye Impendulo yi-10000.
Yonke into ilula kakhulu ukubala, ukuba ucinga ngokulandelelana. Ke, kuba ngokuchanekileyo kukho i-100 cm kwimitha enye, ngoko ke kwisikwere esinye kuya kubakho i-100 * 100 = 10000 yeesentimitha. Impendulo echanekileyo kulo mbuzo 10000 isikwere.
Ukuba siyayikhumbula intsingiselo yesimaphambili sesaci sesiLatin, kuya kuvela ukuba isenti ikhulu leemitha eziqhelekileyo, oko kukuthi, ngqo isentimitha enye. Kunzima ukufumana ukuba zingaphi iisentimitha ezi-skwere, kuba la manani alinganisa izinto ezahlukeneyo - indawo kunye nobude. Kodwa ukufumanisa ukuba zingaphi iisentimitha ezi-skwere nganye ayinzima, kufuneka ucinge nje isikwere esinecala elinye leemitha kwaye sahlule icala ngalinye kwicentimitha enye. Ke indawo yesikwere iyimveliso yamacala ayo kwaye ilingana namawaka alishumi. Ke ngoko, kwisikwere esinye seemitha ezili-100 zeekhilomitha.
I-100 yeesentimitha kwimitha enye, ngoko ke kukwere enye:
100cm * 100cm = 10 sq. yabona
Kwaye ibalwa njani imitha yesikwere kwaye iyintoni .. Esi sikwere sinobude beemitha ezili-1. S = a2, i.e. S = 1 mx 1m = 1 sq. imitha
Kulula ukubala ukuba zingaphi iisentimitha ezizakubakho ngemitha yesikwere, ngoba kwimitha kukho iisentimitha ezili-100:
Imitha yesikwere iyunithi yomlinganiselo, apho icala ngalinye liya kuba nemitha. Ukuba uguqulwanga kwisentimitha, ke iipesenti eziyi-100 nganye, ngokulandelelana. Oko kukuthi, siphindaphinde nge-100 cm nge-100 cm, sifumana ukuba ku-1 square metres ubukhulu be-10 000 cm:
Ukuba kukho i-100 yeesentimitha kwiimitha, ukuze ke ufumanise ukuba zingaphi iisentimitha ezi-skwere, kufuneka uphindaphinda-100 nge-100. Oko kukuthi, kuya kufuneka wandise elinye icala lesikwere kwelinye, kwelinye icala, fumana indawo yenani.
Impendulo yile: i-10 yeesentimitha kwimitha enye yesikwere!
Kwimitha elula, i-100 yeesentimitha. Kwaye ukufumanisa ukuba zingaphi iisentimitha ezikwimitha enye, kuya kufuneka uphindaphinde nge-100 nge-100, ufumana i-10 yeesentimitha. Impendulo ilula, ungahluphi nje nge-zeros xa usiphindaphinda.
Ukuphendula umbuzo kufuneka wazi ukuba yeyiphi;
Imitha yesikwere Ngaba iyunithi yokulinganisa yendawo.
Umda lixabiso lenani lejometri kwindawo enemitha emibini.
Indawo yesikwere Icala le-1m liyimitha eyi-1, kuba ichazwa njengemveliso yamaqela.
Zingaphi iisentimitha kwimitha enye?? Oku kuyaziwa kwabaninzi: 1m = 100cm. Emva kokubala indawo yesikwere ngeesentimitha, sifumana: 100cm * 100cm = 10000 cm cm.
Imitha enye yesikwere = 1 yeekhilomitha skwere.
Ndiza kongeza impendulo yam kunye nesenti yokuba isikwere sesikwere siyakulingana no-1/1 10000 wemitha yesikwere.
Uyazi, kukho into endiyikhathazileyo kancinci. Ukuze ungabhideki abanye, thatha uhambo ujonge iWikipedia kwaye ke ndiza kunika impendulo. Ke, kwimitha enye yesikwere ...
Ngcono ... vumela iikowuti:
Ngoku ngokuqinisekileyo akukho mathandabuzo ashiyekileyo.
Imibuzo ye-21 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,343.